With ukuthuthukiswa imithi, abantu ngokuya azikhohlwa ukuthi zingelashwa by ezivamile nazo zonke izitshalo. Yilokho kudingekile kuphela ukwazi ukuthi kuvela isifo kusiza, nendlela upheke ethile Folk imithi.
Kuyaphawuleka ukuthi Snowball - kungcono berry enemisebenzi ezingasiza ukubhekana nezifo eziningi. Ngakho, it is kahle elisetshenziswa izimonyo, abesifazane ngokusiza lungise ibala futhi ukubhekana nale nkinga induna, ephelele ekwelapheni izifo zokuphefumula: ukucinana kwemigudu yokuphefumula, laryngitis, namathansela, ukukhwehlela abavamile. Njengoba kahle Kalina kwehlisa umfutho wegazi, ingasetshenziswa i-izinyathelo uma imikhuhlane kungenzeka.
Prevention of the pressure-
Ungathatha viburnum e izinyathelo labo high blood pressure esigabeni sokuqala, okungukuthi, ingcindezi. Ekuqaleni, kuyoba okwanele ngisho ezivamile itiye Kalinovoye (pereteret berry ushukela), kanye ingcindezi ziyolibaleka. Kuhle ukwenza ikhambi elinjalo elula lapha abantu abanemizimba lesi sifo.
Ukwelashwa: kadokotela 1
Nokho, njengoba ikhambi esetshenziswa viburnum kokucindezeleka okukhulu. Recipe ukumnika ukulungiselela kungenzeka kanje. Uzodinga ugqule okungcono ebhodweni koqweqwe lwawo amabili wezipuni amajikijolo bese uthele kubo ingilazi yamanzi abilayo. Ingxube sishisiswe ku namabhati umusi for amaminithi awu 15. esikhundleni amanzi okugeza afake ketshezi endaweni emnyama, kodwa lokhu nqubo ithatha isikhathi xaxa - ngamahola amathathu kwedlule. Ngaphezu kwalokho, bonke elicwengekileyo, yengezwe efudumele amanzi abilisiwe kuze kube sezingeni lokuba ukuthi ingilazi ukumnika uvele ephelele. Ingabe lapha kuthathwe imithi evikela umuntu inkomishi lwesithathu kathathu ngosuku. Lena iresiphi omkhulu, lapho isakhi esiyinhloko kuba amajikijolo viburnum. Ingcindezi emva ukwelashwa okunjalo ngesikhathi esifushane benganhlanhlathi futhi ngeke aphazamise umuntu.
Ukwelashwa: 2 iresiphi
Kuyathakazelisa ukuthi ehluke viburnum ingasetshenziswa ingcindezi. Iresiphi, okuzokwenza manje avezwe, aludingi amajikijolo. Udinga ngeke Snowball amagxolo. Idinga mayelana 10-20 amagremu amagxolo, elithululelwa ingilazi yamanzi abilayo. Umuthi udinga ubilise phezu emlilweni ophansi cishe isigamu sehora. Ngemva kwalokho, yonke into is elicwengekileyo. Thatha tincture, omunye isipuni izikhathi 3 ngosuku.
Ukwelashwa: kadokotela 3
Ngisho nendlela yokulungiselela umuthi, okuyinto eyokusiza ukuba Snowball ingcindezi? Indlela kungenzeka kanje. Ukuze wenze lokho, udinga Thenga kakhulu eyodwa kilogram amajikijolo Viburnum, okuyinto okokusonteka e grinder inyama. Lezi engeza 1 kg uju kanye isigamu ilitha ye nogologo ezinhle. Zonke izithako kumele zixutshwe kahle. Umuthi ilungele ukusetshenziswa! Kumelwe uthathe esisodwa isipuni kathathu ngosuku, kwakuphakathi ukudla. Ngokuphazima kweso ingcindezi kufanele ubuyele esimweni esivamile. Kuyaphawuleka ukuthi isakhi esiyinhloko lapha namanje Snowball ku ingcindezi. Indlela kuhlanganisa lwezinyosi nokuvulwa wonke umzimba, futhi izenzo olandelanayo njengoba brandy for infusions (kuze kudlule isikhathi eside ka ukulondolozwa kwalo). Kunalokho ingasetshenziswa njengenhlangano utshwala kanye vodka (Nokho, ezinye izinto eziningi). Kungcono ukwenza kahle ngaphandle le isithako, kodwa ke izidakamizwa kufanele iphekwe ngezinga elincane kakhulu.
Ephephile yokupaka uhlelo Aviline (Parktronic)
Ukufaka ukushisa endlini yangasese ngezandla zabo. Ukushisa amapayipi e-polypropylene ngezandla